By administrator on	 October 20, 2020 सम्पादकीय, स्थानीय
हिन्दुहरुको महान् चाड बडा दशैँअन्तगर्त नवरात्र जारी छ । घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म १५ दिन मनाइने यो चाड सबैभन्दा ठूलो भएकाले पनि बडा दशैँ भन्ने गरिएको हो । सबैभन्दा ठूलो चाड भएकाले यसबेला परिवारका सबैजना जमघट हुने र रमाइलो गर्ने पक्कै हुन्छ । कामको सिलसिला वा अध्ययनका लागि राजधानी वा सदरमुकाममा रहेकाहरु गाउँ फर्कने क्रम जारी छ । यसले सहरबाट गाउँतर्फ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारीबाट आफू पनि बच्ने र अरुलाई पनि बचाउने अहिले हामीलाई ठूलो चुनौती छ । दशैँ खल्लो हुने त देखिन्छ नै तर पनि यो हाम्रो बाध्यता हो ।
दशैँमा मान्यजनका हातबाट टीका लगाउन अन्यकहाँ जाने चलन हो तर चाड भनेर पनि भएन । अहिले यसलाई कम गर्दा नै राम्रो हुन्छ । कोरोनाबाट बच्न हामीले मुखमा मास्क लगाउने, नियमित हात धुने सेनिटाइजर लगाउने अनि एक मान्छे र अर्काे मान्छे बीचको दूरी राख्ने बाहेक अर्को उपाय छैन । भीडभाडमा नजाने कम्तीमा यति मात्र गर्न सकियो भने पनि कोरोनाबाट बच्न सकिएला । कोरोनाका कारण भएको मृत्युवरण र सङ्क्रमणपश्चात् धेरैको निधार खाली हुने देखिन्छ । यसपालि सबै भेला भएर दशैँ मनाउन पाइने अवस्था छैन । आफ्नै घरमा मात्र टीका, आफ्नै घरमा पिङ अनि आफ्नै घर वरपरको सरसफाइमै दशै सीमित बनाउनुपर्छ । महामारीबाट बच्न सकियो भने त भेटघाट रमाइलो त्यसपछि पो गरौँला ।
घाँटी हेरी हाड निल्नु अवस्था हेरी काम गर्नु भन्छन् । अहिलेको अवस्था नै कमजोर छ त यसलाई त्यही रुपमा मनाउनुपर्छ । एकदिन मात्र खाएर र एकदिन मात्र लाएर हुने भए किन दुःख गर्नुपथ्र्यो र ? भएको बेला गरौँला पनि तर अहिले त्यो अवस्था छैन । भन्नुको अर्थ यही दशैँ दशा नबनोस् । यो समयमा हुनसक्ने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न घरबाट बाहिर निस्कँदा व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरुको अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोस् । सकेसम्म बढी भीडभाड हुने ठाउँहरुमा नजानुहोस् । अन्य व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट जोगिनुहोस् । यसपालिको चाडपर्व परिवारभित्रका व्यक्तिहरुसँग मात्रै मनाउनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् । दुर्गा भगवतीले सबैको कल्याण गरुन् । बडा दशैँको सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ।
प्रदेशले भन्यो ः कोरोनामा नवलपुरका ८ स्थानीय तहमध्य देवचुलीले उत्कृष्ट काम गर्यो
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा गैंडाकोटका भट्टचन र भरतपुरका प्रधान निर्वाचित
नवलपुरमा राष्ट्रवादिहरुको प्रदर्शन
विजय खबर २०७७ मंसिर १४ गते विहान
November 29, 2020 | 23 min 23 secs
विजय खबर २०७७ मंसिर १३ गते विहान
November 28, 2020 | 28 min6secs
विजय खबर २०७७ मंसिर १२ गते विहान
November 27, 2020 | 26 min 57 secs
सांसदहरुले कसरी काम गरिरहनुभएको छ त ? रंगमती शाही , सांसद एवम संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य ।२०७७ मंिसर १२
November 27, 2020 | 16 min2secs
नेपालको कृषि क्षेत्र संकटमा छ ः मन्त्री भुषाल
चितवन, मंसिर १४ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले देशको कृषि क्षेत्र संकटमा…